हार्दिक बधाई : अभिनेत्री रेखा थापाले यी समाजसेवी केटासँग यो मितिमा बिहे गर्दै ! – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /मनोरंजन/हार्दिक बधाई : अभिनेत्री रेखा थापाले यी समाजसेवी केटासँग यो मितिमा बिहे गर्दै !
काठमाडौं । रेखा थापाले समाजसेवी केटासँग लगनगाठोँ कस्दैँछिन् ? अभिनेत्री रेखा थापा अहिले आफ्नो नयाँ चलचित्र निर्माणको तयारीमा छिन् । यसै क्रममा चलचित्र बजारमा रेखाको बारे एउटा हल्लाले तरंग सिर्जना गरेको छ ।छविराज ओझासँग डिभोर्सपछि रेखा कसैसँग रिलेशनमा छैनन् ।
उनको लभ अफेयरको बारे समेत खासै कुरा मिडियामा आएको छैन । देतर, अहिले आएको हल्ला साँ चो हो भने रेखाले छिट्टै बिहे गर्दैछिन् । रेखाले चलचित्र क्षेत्रभन्दा थोरै बाहिरको तर समाजसेवामा क्रियाशिल व्यक्तिसँग बिहे गर्ने रेखा निकट कतिपयले अनुमान गरेको बजारमा चर्चा छ ।
लामो समयसम्म एकल जिवन विताउन गाह्रो भएकाले अब रेखा बिहे गर्ने मुडमा रहेको बुझिएको छ । तर, यी सबै बजारमा चलेका गसिप हुन् । यदि यो गसिप असाध्यै भरपर्दो हो भने रेखाले केहि वर्षभित्रै कसैको हातबाट सिन्दुर लगाउनेछिन् । र नयाँ जीवनको सुरूवात गर्नेछन् । *** याे समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला***
अभिनय सँगसँगै पढाईमा पनि अव्बल रहेकाे नेपाली यी ६ अभिनेत्री
यस्तो भयो स्वेता खड्काको मेहेन्दी (तस्विरसहित)